Etsy ankilany dia nitombo izay tsy izy ireo entana afaran’ny mpandraharaha. Raha 1000 kaontenera ny entana tonga, zara raha misy 300 kaontenera no misy entana aondrana.
Eo amin’ny 450 isaky ny 24 ora anefa ireo kamiao miditra ny Port Toamasina, tonga haka entana. Indraindray misy fahasimbana fitaovana fa ny ladoany ihany koa tsy miasa 24 ora tsy miato, ny sambo anefa misy mitondra kaontenera 1000 be izao isaky ny tonga hany ka mitohana ao amin’ny MICTSL ny kaontenera vokatry ny tsy fifandanjan’ny entana miditra sy mivoaka.
Fanatanterahana ny tetikasa: Hisy tetiandro mazava avokoa, hisy teti-bola ary ny tompon'andraikitra amin'izany »